NgoMgqibelo, Julayi 21, 2012 NgoMvulo, Matshi 7, 2016 UMarty Thompson
I-Alterian SDL | I-SM2 sisisombululo sezoluntu kwimithombo yeendaba esibonelela iinkampani ngokubonakala ebusweni bazo kwimo yentlalo kwaye ziveze ukuba zenzeka phi na iingxoxo ezifanelekileyo, ngubani othabathayo inxaxheba, nokuba abathengi bacinga ntoni ngazo.
UMseki uMark Lancaster ucacisa ukuba kutheni i-SDL iphambili kwimizamo yokuthengisa kwi-Intanethi yenkampani yakho:
Esi sixhobo siqulathe konke ukuqhutyelwa kokusebenza kwesixhobo esona sixhobo sikhulu kwintengiso yemidiya yoluntu, kodwa iyahamba imayile eyongezelelweyo ukuhambisa ubunzima ekufumaneni ukusebenza okunje ngohlalutyo lweemvakalelo, ivolumu yemihla ngemihla, impembelelo ephambili kunye nokunye. Ngelixa izixhobo ezininzi zijolise kwindawo ye-niche yejografi, i-Alterian SM2 ihlala ekhaya ngokusemgangathweni ngokwenyani, ivumela ukuqokelelwa kwedatha kwimowudi yeelwimi ezininzi, uguqulo, kubandakanya iingxelo malunga neemvakalelo, inani labantu, uthungelwano lweendaba zentlalo nokunye. Ukwazi ukuba ulawulo loluntu lwasekhaya, kunye nomxholo wasekhaya, ofanelekileyo ngundoqo kuthethathethwano olusebenzayo, le yimfuneko ebalulekileyo kwiinkampani ezinobukho behlabathi.
Iimpawu eziphambili kunye nokusebenza kwe-SDL | SM2:
Umthamo wemihla ngemihla -Linganisa ubungakanani beencoko zeemveliso ezithile ngokugubungela, chaza amaxesha abandakanya imbali egciniweyo kunye ne-drill kwi-coverage yezithuba ezithile okanye izimvo.
Ukwabelana kwelizwi -Funda ukuba yeyiphi imithombo enefuthe elikhulu kwingxoxo, uphonononge isabelo sohlobo lomxholo kumajelo amaninzi kwaye uthelekise isabelo sengxoxo kwiimpawu ezininzi ukuqonda ukuba yintoni eqhuba incoko.
Thelekisa imihla Hlalutya iincoko zebrendi ngokuchasene nabantu okhuphisana nabo, landela indlela izihloko ezihamba ngayo ngokuhamba kwexesha ngokuthelekisa, jonga icala ngokuthelekisa icala, inqanaba ngokuchasene neminikelo yokhuphiswano kunye nomgangatho wokuthelekisa imigangatho yomzi mveliso.
imixholo -Fumanisa imiba ekuxoxwa ngayo malunga nophawu lwakho, okhuphisana nabo okanye ishishini, uqonde umdla wabaphulaphuli okhethekileyo, qinisekisa ukuba amagama aphambili asetyenziswa ngokuchanekileyo kuseto lokukhangela.
Amanani abantu -Chonga iisayithi ezinefuthe, iibhloko kunye nabantu, icandelo ngokwaziwa, isini kunye nobudala bombhali.
Iimpawu zoMbhali -Thelekisa amagama aphambili ethegi phakathi kwegama lakho kunye nabantu okhuphisana nabo, uqonde imixholo eqhelekileyo kunye nobukhulu bengxoxo, kwaye uchonge amagama aphambili e-SEO.
Ukugqunywa kwemephu -Ubuqonde ubukhulu bencoko kwimimandla eyahlukeneyo, beka indawo ebonakalayo yencoko eyahlukeneyo kunye nokugoba phantsi ukutolika uhlobo lwencoko.
Jonga iiNgxelo -Ukuxela ukwazisa ngonqakrazo olunye kuya kuqinisekisa ukuba awuyi kuphoswa sithuba okanye inqaku elibalulekileyo, fikelela kwizenzi ezifanelekileyo ngexesha lokwenyani kunye nokukwazi ukuhlala unolwazi kwizihloko ezishushu kwaye uphendule ngokukhawuleza.
Iingxelo zeemvakalelo -Ukuqonda ukujonga uphawu lomthengi okanye uvakalelo kwintengiso, qonda ukuhanjiswa kweempawu zorhwebo ngaphezulu kwexesha elithile kunye nokwenza ulwazelelelo oluthile kwishishini okanye uphawu.
Kufuphi, Uhlobo lweAlterian SM2 inikezela ngolwazi olufunekayo ukunceda ekuchongeni abantu ekujoliswe kubo, uluntu olufanelekileyo, abachaphazeli kwintengiso ekujoliswe kuyo, kunye nemephu yendlela ngeendlela ezahlukeneyo zokuzibandakanya nabo. Inika ingxelo ebalulekileyo kunye nokuqonda malunga neendlela zamvanje kunye nophuhliso olufanelekileyo kwi-brand yakho, kunye nolwazi oluninzi olusisiseko olufunekayo ukulungiselela imikhankaso yemithombo yeendaba eyimpumelelo njengenxalenye yesicwangciso sentengiso ngokubanzi.
tags: mhleliInguqulelo sdlisiguquli sm2sdlsm2Imidiya yokuncokolaubuntlola beendaba zosasazoiqonga leendaba ezentlalo
I-NetBase: Iqonga leNtlalontle yoLuntu kweShishini
Xa uthenga abalandeli beFacebook ubuninzi babatyeleli kwiphepha lakho ngokufanelekileyo njengoko indawo yakho iya kunyuka, ikwenza ukuba usebenzise ngakumbi unxibelelwano lwasentlalweni ukonyusa ingeniso. Inani elandayo labantu ngoku basebenzisa iisayithi zokunxibelelana noluntu ekuthengeni ukunxibelelana nabahlobo kunye neentsapho zabo. Ngenani elingenakuthelekiswa nanto labathengi abavula uthungelwano suku ngalunye unelungelo elingenamda lokuveza inkampani yakho, iinkonzo kunye neempahla kubathengi abanokubakho kwihlabathi liphela. Thenga abalandeli be-facebook kwi-yoursocialfans ..
Jul 23, 2012 ngo-9: 45 AM
Sisebenzisa i-SDL Alterian SM2 kubaxumi bethu phantse iminyaka emi-2. Sesona sixhobo silungileyo soHlalutyo lweMidiya yezeNtlalontle kwaye abathengi bethu bayaliqonda ixabiso leSM2 elingcono kakhulu kunalo naliphi na iqonga elaziwayo kwaye liyasebenza ngeelwimi ezininzi. Sithande esi sixhobo!